रामनवमी र चैतेदशैंको महिमा ! – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
रामनवमी र चैतेदशैंको महिमा !
३० चैत, काठमाडौं । हिन्दू धर्मालम्बीहरुले आज रामनवमी र चैतेदशैं पर्व मनाउँदै छन् । दशैं तथा रामनवमीको अवसरमा शनिबार बिहानैदेखि देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनको भीड लागेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको दबाब थेग्न नसकेर मोबाइल बन्द !
ब्रिटिश काउन्सिलाले सम्पन्न गर्‍यो आउट स्ट्यान्डिङ क्याम्ब्रेज लरनर अवर्डस सेरेमोनी